Bandhigii Dhibbaneyaasha Nolosha W/Q:- Mohammed M. Jaaj.
Friday April, 27 2018 - 01:49:20
Monday February 29, 2016 - 10:28:42 in by salman abdi
Dayaanka onkodka ee iska daba dhacaya ayaan hurdada dhawr goor kasoo booday.
Markasta oo gariirka onkodku sanqadho waan soo yar hinqanayay sidii ilmo yari iga dibjiray.
Bustihii iyo go’ii ayaan marqudha iska rogay ka dibna qolkii ayaan dibadda uga soo baxay aniga oo garan kaliya oo garba go’an xidhan. Wax aanan garanayn ayaa dabada iga riixaya oo dibadda ii soo saaray. Barandaha labaad ee guriga, meel dayrka ku beegan ayaan kursi jajabay oo xaafaddu halkaa iskaga tuurtay dabada la helay, ka dibna dhinaca wajahada barandaha u jeestay. Labada lugood ayaan isdul saaray, gacmahana is dhaafiyay. Sawirro badan oo maskaxda iigu kaydsanaa ayaan kolba mid soo saarayaa. Gidaarro badan oo aan madaxa ku soo dhufty ayaan xasuustay. Kolba waxa i soo hormaraya farqiga u dhexeeya noloshaydii hore iyo ta aan maanta ku jiro. Baco raashin oo bari hore la dhigay ayaa dhinac ka mid ah barandaha buuxa. Xashiish iyo qoryo farabadan oo tuulan meesha ayaan fiirfiirinayaa. Nal daciifa ah, oo sudhan wajahadda barandaha ayaan weheshanayaa. Mahiigaankii xalay na maansheeyay ma qaadin mana da’ayo ee wali dhici wuu sii shuuxayaa.
Muuqaalkayga, bartan aan kuududo iyo haylo xumaantayduba waa tabtii aan ahaan jiray. "Alla meeshu halkii u e’kaa” ayaan niyadda iska idhi. Habeen laba qaybood tagtay ayaannu isku kaliyaysannay halkan aan fadhiyo. Qabawga uu ka tegay roobkii saqda dhexe da’ay iyo dhaxantii ayaa sida laydha jidhkayga ugu dhacaya anna maba dareensani. Daad sii dhammaanaya ayaa wajahadda barandaha maraya oo dayrka meel hoose oo daloosha guriga u sii dhaafaya. Sida daadkaasi u socdo ayay noloshuna socod joogto ah ugu jirtaa shaw ayaan nafta ku ugu tusaaleeyay. Waxa aad mooddaa waxa dhacaya iyo sida ay u dhacayaanba in aanay igu cusbayn.
Daasadda hortayda taalla ayaan in badan indhaha ku ganay. Haddana waan ku ganay. Si arxan darro ah ayaan indhaha uga dhexsaaray daasaddan diiqsan ee hortayda taalla. Sanqadh yar oo dhibica korkeeda ku tifiq lihi abuuray ayaa dhegtayda soo gaadhaysa, anna waan dhibsanayaa. Waxoogaa markii aan eegayay ayaan ka jeestay oo nafta meel kale ku jiheeyay. Roobka xalay na miray iyo gibilka daruuraha ah ee cirka ku shaqlan ayaan waxoogaa eeg eegay. Dadka dibadaha ku dibbooday ee roobkaasi cidlada ku haleelay ayaan qalbiga uga damqaday. Xiddigaha oo maqan iyo dayaxa oo daruuraha dabadooda ku dhuuntay ayaan iskaga mashquulay. Habeenka iyo nimcadiisa ayaan waxoogaa qalbiga kaga faallooday. Sida ilaahay addoomihiisa ugu nimceeyay misna habeenkii hurdo ugu deeqay, cadceeddiina godka kaga qariyay ayaa i cajab galisay. Magaaladii saxmadda iyo dadka badnayd oo aan cidi soo jeedin ayaan kaligay halkan fadhiyaa. Dadka aan hoy ay galaan lahayn iyo roobka maxaa kala haysta ayaan is waydiiyay. "Alla maxaa qof roobkaasi meel cidla ah ka helay oo qandhoonaya. Adiga maxaa gurigaaga kaa soo saaray ee kaa galay dadka roobku mashaqeeyay. Bal miyaanu midh ka reebin oo xeradooda cirka ka oodo. Imisaa daad ku xanbaartay oo dawyo baas kaala dhacay ma cid aan Ilaaahay ahayn ayaa ku bixisay. Bal gurigaaga mooyee maanay cidiba ka hadhin magaaladan dhan ee wada laydhinaysa” ayaan niyadda ka idhi intaan afka cirka u taagay.
Sheekadii roobka ayaa waxoogaa ila durugtay oo cirka ayaan ku fogaaday. Goor aan cirka ka soo degay oo daasaddan hortayda taalla ku soo guryo noqdayba mooyi. Aniga oo sidii qof i hortaagan indhaha ugu gubaya ayuun baan mar kale is arkay. Sidii si ka daran ayaan u sii karhay daasaddan la iska tuuray ee qofkii lahaaba markii uu ku danaystay halkan bannaan ku tuuray. "hadday cidi dan ka leedahay saw roobka lagama xareeyeen oo banaanka lagama qaadeen xiligan roobku da’ayo” ayaan hoos isugu idhi. Waan diiddanahay, haddana waan daawanayaa anigoo hoosta ka hiifaya. Hadii aan farolaab haysto waan ku dhufan lahaa, waliba ganaca ayaan ku goyn lahaa ka dibna meel daran ayaan ka tuuri lahaa. Waa run oo waa daasad budh kasta iyo dhagax kasta oo lagu dhufta midna waxba ka qaadi maayo, haddana anigu waan ku ciil bixi lahaa, cadhada aan u qabo awgeed. "Alla maxay dad lumisay oo maanka iyo miyirkaba ka qaadday. Maxa ay qof wanaagsan shaadh madaw u galisay oo ummadda ka dhexsaartay. Xabaal lagugu rid.!” Ayaan kor ugu idhi sidii qof dhega qaba oo i maqlaya.
Cadaawadda aan u hayo waxa sal dhig u ah xusuusta ay ku kaakicisay qalbigayga. Xusuuso meel daran igala dhacaya ayay igu soo faruurtay. Araggeeda ayaa maskaxdayda boqolaal kilometer dib u celiyay. Ma wax la xasuustaabaa? Qofkasta oo garanayaa daasaddaa iyo halka xasuustayadu iskula biyo shubanayaan wuu ii garaabi lahaa. Si kasta oo ay ahaataba ma doonayo in aan xasuusto.
"Bal u fiirso waa daasad adigase sida ay kuu dhibayso si la mid ah ayay macno kuugu fadhidaa” ayaan hoosta ka idhi. Hadda waan u dabcay, oo waanu isaga soo dhawaannay intii hore. Maanka iyo qalbiga ayay farriimo u dirtay, ka dibna faq hoose ayay ila gashay. Laba nafood oo isku waramaya ayaannu noqonnay aniga iyo daasaddii. Su’aalo aanan jeclayn in la i waydiiyo ayay i waydiinaysaa. Ma sidan ayay ahayd? Oo maxay u ahaatay? Hadda se sawkan xaalku sidii hore ka duwan ee noloshaadii sawir kale yeelatay? maxaa aad ku doorsatay noloshaadii hoogga iyo haaraanka badnayd ee dooxa?. Xuska iyo garashadaba iyada ayaan xaggeeda ku hagaajiyay markii ay sidan wax ii su’aashay. Waxa ay iiga waramaysaa noloshaydii hore iyo wixii waayo isoo maray. Gabiyo iyo dooxooyin aan qalibiga diidsiinayay ayay i tustay. Waxa ay igala dhacday meel daran iyo dhul aanan doonayan in aan marlabaad arko. Markaliya ayay majaraha ii qabatay oo ay i gaysay dooxii noloshayda koobaad. Waxa ay daaqad in le’eg iga tustay bandhigii dhibbaneyaasha nolosha iyo booskii aan ku lahaa dooxa. Ka dibna sidan ayay wax u dhaceen.
Dooxii iyo darbiyadii ayaan dib u gu laabtay aniga oo maryo jeexjeexan xidhan. Gacanta bidixna daasaddaydii xabagta ee aan caanka ku ahaa ku sita. Surwaal daba gaab ah iyo garan fiino ah oo uskagga iyo foolxumada ayaad yaabto ayaan xidhanahay. Laba dacas ah, mid yar iyo midwayn oo indhashu go’an tahay ayaan lugaha ku cidhiidhyay. Dhoobada ayaa iiga buuxsantay sidaan dhiiqada dooxa iyo suuqa ula dhexqaadayay. Markii aan culays qaadi kari waayay ayaan meel gidaar ah kaga dhaqaaqay. Sida ay dharkaygu u fool xunyihiin ayay iigu qurux badan yihiin, waayo kuwa ka fiicanba maan xidhan. Sida ay dadku noogu dhibsadaan dib jirnimada, uskagga iyo maryo xumaanta ayaannu isugu jecelnahay. Ha fool xumaato ama yay foolxumaane Kabaha iyo kabo la’aantu waa iskugu kay mid. Noloshaba waxa aannu u haysannaa guddaafaddan aannu subaxii ka toosno iyo daasaddan xabagta ah ee aannu isku baacsanaynno. Xaaladda sidan u qalafsani waxa ay na bartay in aannu la qabsanno nolosha duruufaheeda kala duwan. Waa nolol adag haddana fudud marka la eego war war la’aanta iyo xoriyad badnaanta.
Goor aan doortay iyo goor aan laasimay daasaddan xabagtu ka buuxdo maan aqoon, aniga oo sita ayuun baan garaadsaday. Asxaabta ila nuugta iyo inta kale ee igula nool darbiyada halkan ayuun baannu isku barannay. Ma jiro qof garanaya goor u yimi. Qof waliba waxa keenay duruufo gaar ah. Mid hooyadii iyo aabbihiiba dhinteen sida aniga oo kale. Mid waalidiintii kala tegeen sida Axmed. Mid sabool ah oo dooxan naf soo mooday Kaboole. Mid.. Mid… Mid…. Mid la dayriyay iyo mid la duudsiyayba waa dad noocaas ah oo halkan uun noloshu isugu keentay. Maalintii sammadda kama hadhsanno , habeenkiina qadoodiga kama hoy galno oo dooxan ayaaba hoy noo ah. Dagaal midba ka yar dilo iyo awood sheegasho aan la isu aabbo yeelin ayaa taalla. Mid waliba ka uu ka awood badan yahay ayuu aasaa marka aannu xabagta ka dheregno, haddana ma kala tagno, waayo waxa aannu nahay balaayo isu baahan oo aan midna ka kale la’aantii noolaan karin. Intaasiba waa sahaalo’e waxa nagaga daran isbedbedelka xilliyada. Qalafka dhaxanta jiilaalka, qabawga roobka gu’ga iyo daadadkuba waxa ay nagu soo booqdaan darbiyada iyo dooxa hareerihiisa.
Habeenkii marka dadku seexdaan ayaannu iska camirannaa kharaabaddii dooxa u dhawayd. Halkaa ayaannu xabagta iyo isbiirtada habeen oo dhan isku roorsannaa. Alla maxaannu bahalownay.! Waabariga ayaannu hurdo aan doorasho ahayn, daal iyo gaajo iska dul daadannaa. Tobanka subaxnimo ayay cadceeddu falaadhaha arooryaad nagu dhalaalisaa. Anaga oo beer cadaad ah oo gaajo bogga iyo beerku isku kaaya dhegay ayaannu suuqa ku digaafnaa. Halkaa ayaa qofba Ilaahay waxa uu ka siiyaba loo kala arsaaq tagaa.
Shan iyo toban gu’ oo aannu doox iyo darbi jiifnimo ku qaadanay ka dib, galabta farxad iyo shucuur diirran ayaa naga muuqata. Kaftan iyo haasaawe ayaannu iskala daallay. Qosol iyo sheekada nolosha darbi jiifnimada ayaannu wakhtiga ku idlaynay. Saddex ka mid ah boqortooyadii darbi jiifka ayaa halkan ila fadhiya. Farxadda maanta na maanshaysay waxa sababteeda lahayd Axmed hooyadii oo noogu timi halkan derbiga ah ee aannu iskaga sheekaysanaynay. Waa hooyo naxariis badan oo wiilkeeda jecel balse nolosha ayaa u saamixi wayday in iyada iyo wiilkeedu wada noolaadaan. Waa hooyo ka duwan inta aan qof wax dhalay arkayay. Waa qof dareensan in aannaan halkan dooran ee duruufi nagu hayso. Maryo iyo waxoogaa lacag ayay saddexdayadii nasiisay, aniga Axmed iyo kaboole. Timaha ayaannu iska xiirnay ka dibna isku joog maryo ah oo ay na siisay halkii ku labbisannay. Axmed ayay woxoogaa waanisay oo madaxa u salaaxday. Qalbiga ayaan ka ilmeeyay aniga oo jidhka ka dareemaya naxariista hooyanimada. laakiin dareensan hooyo la’aanta.
Aniga oo miyirkayga iyo maankayguba dooxii joogo, maqaarkayguna kursiga kuududo ayaa markaliya eedaankii sallaaadda subax dhegta igaga soo dhacay. "Allaahu akbar. Allaahu akbar”. "Acuudu Billaah waar ma halkiibaad wali kambadhuudhaa. Laakiin maxa dooxii kugu celiyay. Waxaas oo dhan ma daasaddaas ayaa ku tustay.” ayaan is waydiiyay. Markuu eedaankii dhammaaday ayaan haddana eegay daasaddii mise halkiibay soo arag xuntahay. Halkii ayaan markale xusuustii dooxa dib ugu laabtay.
Axmed iyo Kaboole waa kii dooxu ku soo rogmaday idinka oo hurda sidiina ku qaaday. Adiguna waadigii dirqi iyo sidii ilaahay uun ogaa kaga badbaaday. Qayladooda ayaad si fiican u sii maqlaysay. Haddaad bixino karayso iyagaa ugu mudnaa cid aad nolosha ku badbaadiso. Dad dhimanaya oo waliba kuwii kuuga dhawa ee aad dhibta iyo dheeftaba, wadaagayseen oo aad arkayso iyaga oo dhimanaya, waliba qaylinaya kasii darane aanad waxba u qaban karayn waa mid subxaan Alle. Kaboole isagaa cid kuugu dhawaa, waa saaxiibkaagii labada gu’ kaa waynaa. Maalinta aad qaddo isna wuu qadi jiray. balse tiisii ayaa timi oo waa kii dooxa kugu cidleeyay.
Noloshii darbi jiifnimada waxa iigu biiray saaxiib la’aan. Oo labadii qof ee iigu dhawaa iyaguna waa kuwaa si xun u dhintay ee daadku qaaday habeen madaw. Laakiin halkii ayuunbaan kasii waday taxanihii nolosha oo xabagta ku nuugi jiray illaa aan waynaaday oo aan noqday nin xila saamad ah. Muddo ka dib waxa ila qadhaadhaatay noloshii adkayd iyo dooxii. Waxa aan bilaabay in aan nolosha waji cusub u sameeyo. Shaqadii koowaad waxa aan ka bilaabay doobbilaha ka soo horjeeda fooqa oday Guure. Halkii ayaan laba sano maryaha ku maydhi jiray. Waxoogaa noloshaydii way soo wanaagsanaatay oo sidii hore way dhaantaa. Ugu yaraan dadkii caadiga ahaa ayaan soo dhex galay.
Fooqa labada dabaq ah ee dooxa labada guri u dhexeeyaan ayay leeyihiin. Hooyadeedna halkaa ayay meheradda hudheelka ah ku haystay illaa yaraantaydii, oo meeshaas ayaan ku arki jiray. Islaanta Cadar ah ee iyada dhashay mar way na fogayn jirtay marna way na soo dhawayn jirtay. Yeelkeeda haddana waxa ay ahayd isha kali ah ee marka aannu gaajada xejin wayno aannu hadhaaga/hanbada u doonanno. Ma ahayn cadaawad gaar ah ee, waxa ay kala sinnayd dadka kale ee aannu ku dhex noolnahay. Waxa se jirtay sabab kale oo Cadar ay noo fogayn jirtay iyada oo ka baqa qabta in aannu dhibaatayno inanteeda oo hudheelka ka kala shaqayn jirtay. Imisa jeer ayaannu ku fikirnay in aannu Siraad habeen qudha is dhaafinno oo beerka kaga degno. Alla maxay ballaayo aannu u soo maleegnay ka badbaaday ta yari. Waa qof wanaagsan sida aannu dibjirta u nahay noolamay dhaqmi jirin. Waxa ay noo arkaysay dad caadi ah oo aan dooran sidan balse duruufo nololeed ku kallifeen. Waxa ay na siin jirtay cuntada hadhaaga ah marka aannu is soo tubno hudheelka wajahaddiisa. Sida ka muuqatay wajigeeda waxa ay islahayd "tolow kuwani sidan ma iyagaa doortay mise waa la deedifeeyay.” Waxa ay se garawsan tahay in annaga iyo iyaduba u siman nahay nolosha wanaaggeeda iyo xumaanteedaba.
Muddo ka dib waxa i galay han hore u socod ah,oo dhinaca shaqada ah. Aniga oo is bidaya in aan hadda waynaaday, shaqo bartay noloshii xumayd ee dooxana iska maydhay oo dadka soo dhex galay. Oday guure waxa uu la socday xaaladaha kala duwan ee noloshayda illaa maanta. Ugu danbaynna waxa uu geeyay bakhaaro uu ku lahaa suuqa dhexdiisa. Shaqada wanaajinteeda waxa aan u arkayay in ay waajib tahay balse guure waaxa uu igu aaminay dhammaan baayac-mushtarkiisii. Aakhirkiina sidaa ayaan kula wareegay maamulkii ganacsiga oday Guure. Waxa se maangal igu noqon wayday markii uu gabadhiisa Siraad ii guuriyay.!
Sidii aan u dhex jibaaxayay badwayntii noloshayda hore iyo wixii aan balo la kulmay ayuu aqiimkii salaadda subax markale sheekhu ka dhawaajiyay. "Qad qaamati salaah. Qad qaamati salaah.” Waa anigii oo halkii barandaha wali kuududa oo daasaddiina sidii ii soo hor qotonto. Shaw waxa aan isaga tallaabay laba nololood oo boqollaal mayl u dhexeeyaan. Waan jiitay, oo fogaaday haddana waanigan kursigii fadhiya. Waxa uun baan maqli jiray ‘maskax ka dhoof’ illayn makaxdaan ka dhoofay. Laakiin way fiicnayd in aan soo kormeero noloshii qodxaha iyo qaxarka badnayd. Si aan u ogaado jaranjarada aan u soo fuulay halkan aan caawa fadhiyo. Waxa se i cajab galisay sida daasaddani ii xasuusisay waxaas oo dhan. Markaliya ayuun bay gurigaygii iga kaxaysay oo ay bandhigii darbi jiifka iga xaadirisay. Bahashu ma qof baa. Qofba ka daran’e waa balo ilaahay noo soo diray. Bal maxay waxan oo dhib ah noo soo marisay? Hanna soo marisabee maxay noo xasuusisay, ee ay waliba noo hor yuururtaa. Mooyi.! Saw adigu hurdadaadii kamaad soo kicin oo halkan maad soo fadhiisan ayaan haddana isku illawsiisyay.
"Wixii hawl iyo dhib ku soo maray maanta waad ka nooshahay oo waadigan guriga cad ku jira ee noloshaadii oo dhammi is beddeshay. Isbedelka noloshaada oo dhan waxa sababteeda lahaa guurkii Siraad. Jiritaankaaga waxa ku ammaanan Siraad aabbaheed oo adiga oo darbi jiif ah inta uu nolosha ku baray, haddana gabadhiisii kugu daray. Isaguba waa qof” ayaan qalbiga kula xanshaashaqay inta aan aabbaheed u duceeayay. Ka dibna Inta aan hareeraha iska eegay oo aan kursigii ka booday ayaan hore ka waysaystay oo xagga masjidka u kacay.
W/Q:- Mohammed M. Jaaj.
Daawo:Wiil Hab Casriya Ku IIBIYA Shaaha"Barnaamijka Masraxa Nolosha By Yaasmiin
23/01/2018 - 19:03:09
Bosnia 'gashaantidii nolosha iyo geerida' oo xabsi lagu xukumay
28/12/2017 - 09:42:49
Lamaane da'ah oo reer Kanada ah ayaa niyad jabay ka dib markii ay ogaadeen in lakala kaxaynayo markii u horraysay muddo toddobaatan sano ah oo ay nolosha wadaagayeen.
20/12/2017 - 08:27:19
Muxuu Tababare Zidane Ka Yiri Casaankii CR7, Bandhigii Wiilashiisa, Kulanka Lugta Labaad & Hadii Ay Laba Koox U Kala Qeybsan Tahay Madrid.
14/08/2017 - 11:10:02
Madaxweyne Erdogan Oo Ku Taliyey In Masaajidda Laga Dhigto Qayb Ka Mid Ah Noloshada Bulshada
06/08/2017 - 15:44:24
Daawo;Magaalada Hargeisa Oo Lagu Soo Xidhay Carwada Bandhiga Buugaagta Oo NoqotayBandhigii Ugu Hadal Haynta Badna Isla Markaana Taariikhda Gashay
28/07/2017 - 18:42:47
Naadiga Halkaraan iyo Wacdaraha Bandhigii Buugga Bilan+SAWIRO
20/05/2017 - 14:52:49
QOF WANAAGSAN OO LALA QAYBSADO NOLOSHA W/Q:Cabdiqani
06/05/2017 - 17:26:55